आईफोनबाट डीएसएलआर जस्तै फोटोग्राफी गर्न चाहनुहुन्छ? यस्ता छन् शानदार क्यामरा ट्रिकहरु - Technology Khabar
» आईफोनबाट डीएसएलआर जस्तै फोटोग्राफी गर्न चाहनुहुन्छ? यस्ता छन् शानदार क्यामरा ट्रिकहरु
केहि दिअघि आएको एक रिपोर्टअनुसार विश्व बजारमा सन् २०२१ मा लन्च भएका फोनहरु मध्ये एप्पलको आईफोन १२ प्रो म्याक्सलाई उत्कृष्ट फोन भएको बताईएको छ।
यो फोनलाई विभिन्न फिचरहरुका आधारमा उत्कृष्ट भएको बताईएको छ जसमध्ये क्यामरा पनि हो। आईफोन १२ सिरिजकै फोनको रुपमा आएको यो फोनका साथै आईफोन १२ प्रोलाई पनि उत्कृष्ट आईफोनको रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
त्यसैले यहाँ हामी तपाईँलाई आईफोन १२ प्रो फोनबाट आकर्षक फोटो खिच्ने तरिका र त्यसमा भएका फिचरहरुको बारेमा जानकारी दिनेछौं। हामीले यहाँ भनेको क्यामरा सेटिङ्गहरु तपाईंको आईफोन स्मार्टफोनमा काम गर्दछ।
स्मार्ट एचडीआर ३
आईफोन १२ प्रोको स्मार्ट एचडीआर ३ फिचरले सीनलाई बुझ्दछ र त्यसैअनुरूप सेटिंग्स लागू गर्दछ। यसले फोटोहरूलाई थप जीवन्त र भाइब्रेन्ट बनाउँछ। विशेषरुपमा आउटडोर शुटको लागि यो सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईँले फोनको क्यामरा, सेटिंग्स, त्यसपछि स्मार्ट एचडीआरमा जानुपर्छ।
यो फिचरले आईफोनको टेलिफोटो लेन्स प्रयोग गरेर फोटो क्लिक गर्दछ। यसबाट लिइएको फोटोहरू जूम फोटो जस्तै किसिममा आउँदछन्, जसले गर्दा कम प्रकाशमा पनि बिस्तृत इमेज लिन सकिन्छ। यो मोड स्थितिअनुसार रातको समयमा स्वचालितरूपमा सक्रिय हुन्छ।
यदि तपाईं रातमा उत्कृष्ट तस्वीरहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यो सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्। यो मोड आईफोन १२ प्रोको वाइड, अल्ट्रा वाइड र ट्रुडेप्थ क्यामरामा उपलब्ध छ। यो मोड पनि रातको अन्धकारमा आफैँलाई सक्रिय हुने गर्दछ।
यदि तपाईं डीएसएलआर जस्तै फोटो चाहनुहुन्छ भने यो मोड उपयुक्त हुनेछ। विशेष कुरा यो हो कि तपाईंले फोटो क्लिक गरिसकेर पनि तस्वीरको पृष्ठभूमि धमिलो (ब्याकग्राउण्ड ब्लर) बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कम लाइटमा पनि पोर्ट्रेट फोटो लिन सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेट मोड फोनको क्यामरामा नै देखिनेछ।
महालेखाको प्रतिवेदन- मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर एकमुष्ट लेऊ र २० अर्ब रुपैयाँ नै कायम गर
आउटलुक डाउन: माइक्रोसफ्टको ईमेल सेवामा समस्या, ईमेलहरू खुलेनन्
ह्वावेको बेलायतमा जन सम्पर्क अभियान, २० वर्षको आफ्नो योगदानलाई विज्ञापनमार्फत सम्झाउँदै